12 Toerana mozika tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao | Save A Train
Home > Travel Europe > 12 Toerana mozika tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao
ny Paulina Zhukov
Train Travel Austria, Fiaran-dalamby Britain, Train Travel China, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Train Travel UK, Travel Europe
Fotoana famakiana: 7 minitra
(Last Nohavaozina: 24/12/2021)
Manomboka amin'ny teatra taloha mahavariana eo ambanin'ny kintana ka hatrany amin'ny efitrano mahafinaritra sy kanto, ireo 12 toerana mozika tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao no mety raha tena te hiaina ireo kaonseritra tsara indrindra ianao. Shanghai, Berlin, London, ary i Italia dia vitsivitsy amin'ireo toerana tsara indrindra hankafizana ny kaonseritra mozika mivantana manaraka.
Rail Fitaterana NO Eco-Friendly Way To Travel. Ity lahatsoratra ity dia nosoratana mba hampianatra momba Train Travel ny Save A Train, The Tranokala tapakila tapakila mora indrindra Eto amin'izao tontolo izao.
1. Toerana mozika tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao: Royal Albert Hall any Londres
Nosokafan'ny iray amin'ireo mpanjakavavy malaza indrindra manerantany, Queen Victoria, ny Royal Albert Hall any Londres, dia iray amin'ireo toerana malaza mozika malaza manerantany. Rehefa miditra ianao dia hanaiky avy hatrany fa tena mpanjaka izany. Avy amin'ny haingon-trano mankany amin'ny atmosfera rehefa maty ny jiro, ny konseritra eto dia hanome anao goosebumps.
Koa satria 1871 mpankafy mozika amin'ny fomba rehetra, manatrika ny Royal Albert Hall ho an'ny 365 andro. Noho izany, na jazz ianao, vatolampy, na mpankafy mozika kilasika, ny kaonseritra mozika mivantana ao amin'ny Royal Albert Hall dia traikefa tsy tianao halaina rehefa any London. Ny Royal Albert Hall dia any South Kensington, ary mora azo amin'ny fantsona.
Amsterdam mankany Londres miaraka amin'ny lamasinina
Paris mankany London miaraka amina lamasinina
Berlin mankany London miaraka amina lamasinina
Bruxelles mankany London miaraka amina lamasinina
2. Ny O2 Arena any London
Ny toerana mozika faharoa tsara indrindra ao amin'ny 12 toerana mozika tsara indrindra eran'izao tontolo izao dia ny O2 Arena any London. Izy io dia iray amin'ireo toerana mozika mivantana lehibe indrindra any Eropa, ary izao tontolo izao, misy efitrano ho an'ny a 20,000 mpanatrika. Ary, in 2008 nihoatra ny fivarotana tapakila an'ny Madison Square Garden aza izany.
mpanjaka, Cirque Du Soleil, Alicia Keys, ary ny loka amerikana, dia vitsivitsy monja amin'ireo hetsika mozika azonao ankafizina ao amin'ny O2 Arena. Mila mandeha any ivelan'ny afovoan'i Londres ianao, mankany Greenwich, fa ho an'ny traikefa mozika tsara indrindra, mendrika tanteraka ny manahirana.
3. Toerana mozika tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao: Musikverein any Wina, Aotrisy
Namboarina ho boaty mozika tonga lafatra, tandindon'ny fahamendrehana, ny Wiener Musikverein, na fikambanana mozika, no toerana mozika kilasika farany any Eropa. Trano misy ny philharmonics Viennese, ny efitrano mozika dia natao tamin'ny mahazatra Eoropeana fomba tempoly, miaraka amin'i Frescos of Apollo eo amin'ny valindrihana.
364 andro isan-taona, mpitia mozika erak'izao tontolo izao, mitsangatsangana any Wina hahazoana traikefa nahafinaritra sy tsy hay hadinoina. Misaotra ny maritrano, akustika, mozika, toerana, ary rivotra, ny Musikverein no eo an-tampon'ny 12 toerana mozika tsara indrindra eto an-tany.
Salzburg mankany Viena miaraka amin'ny lamasinina
Munich mankany Wina miaraka amina lamasinina
Graz mankany Viena miaraka amin'ny lamasinina
Prague mankany Vienna miaraka amina lamasinina
4. Verona Arena any Italia
The 12 toerana mozika tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao dia tsy maintsy asongadinina ny toerana tsara indrindra hanaovana fampisehoana opera epic. Ny Verona Arena dia natsangana tamin'ny taonjato voalohany, ary mbola anio ihany no hahitanao azy, ary mampiantrano mpankafy opera manerana an'izao tontolo izao.
Ny Verona Arena dia Amphitheater vato malalaka, ary ny rindriny dia hilaza aminao ny momba ny gladiatera ary hibitsibitsika ny tenin'ny tarika pop. Ny endrika elliptical dia mametraka ny kianja Verona ho iray amin'ireo toerana tsara indrindra any Italia amin'ny fampisehoana mozika mivantana. Ireo akustika, nandrehitra alina ny toerana, mahatonga azy io ho iray amin'ireo toerana mozika manokana any Eropa.
Rimini mankany Verona miaraka amina lamasinina
Roma mankany Verona miaraka amina lamasinina
Florence mankany Verona miaraka amina lamasinina
Venise mankany Verona miaraka amina lamasinina
5. Ivotoeram-pirenena ho an'ny zavakanto fampisehoana any Beijing, Shina
Ilay miendrika atody, zavakanto maoderina tapa, ny foibem-pirenena ho an'ny zavakanto fampisehoana dia iray amin'ireo trano manaitra indrindra any Beijing. Ho fanampin'ny endrika tsy manam-paharoa eo afovoany, misy farihy artifisialy manodidina azy.
Ny foibe nasionalin'ny fampirantiana zava-kanto no toerana tsara indrindra hankafizana opera sy fampisehoana mivantana any Sina. Na izany aza, raha tianao ny fampisehoana mozika sinoa nentim-paharazana, avy eo ny efitrano fampisehoana no toerana mety indrindra.
6. Toerana mozika tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao: Arena Of Nimes Ao Frantsa
Ny amphiteater romana taloha indrindra dia afaka mampiantrano hatramin'ny isa marobe 24,000 tia mozika. Manintona mpitsidika an'arivony isan-taona ity toerana mozika mahatalanjona ity, amin'ireo hetsika mozika mampihetsi-po indrindra any Frantsa.
Manomboka amin'ny pop fandihizana ankehitriny mankany Hans Zimmer, hetsika mozika mivantana ao amin'ny Arena of Nimes dia tsy hay hadinoina. Miaraka amin'ny jiro mareva-doko amin'ny alina ny rindrina, ny rafitra fanamafisam-peo – Mampientanentana tokoa ny kaonseritra iray eto.
Paris mankany Nimes miaraka amina lamasinina
Montpellier mankany Nimes miaraka amina lamasinina
Marseille mankany Nimes Miaraka amin'ny lamasinina
Mahafinaritra an'i Nimes Miaraka amin'ny lamasinina
7. Forest groyne any Berlin
Any amin'ny Park olympika ao amin'ny tanàna fety Berlin, ny Waldbuhne dia amiteiteur malalaka. Voahangy Voahangy, ny philharmonic any Berlin, ary i Taylor Swift dia vitsivitsy amin'ireo mpanakanto manome kaonseritra amin'ny toerana mozika goavambe.
Ny Waldbuhne dia namboarina voalohany ho an'ny lalao Olaimpika ao 1934, fa nanomboka tamin'izay dia lasa iray amin'ireo 12 toerana mozika tsara indrindra any Alemana, ary izao tontolo izao. Mety ho iray amin'ireo tsara vintana ianao 20,000 olona manatrika fampisehoana mozika mivantana, voahodidin'ny ala. Ity toerana mozika mahafinaritra ity dia nampiantrano kaonseritra epic maro nandritra ny taona maro, amin'izay ianao mety ho anisan'ny tantara mozika amin'ny hetsika mozika lehibe manaraka any Alemana.
Frankfurt mankany Berlin miaraka amina lamasinina
Leipzig mankany Berlin Miaraka lamasinina
Hanover mankany Berlin Miaraka lamasinina
Hamburg mankany Berlin miaraka amina lamasinina
8. Yuyintang Any Shanghai, Shina
Our 12 ny lisitry ny toerana mozika tsara indrindra dia tsy ho feno amin'ny klioban'ny mozika ambanin'ny tany any Shina. Yuyintang any Shanghai dia tsy lehibe noho ireo toerana mozika hafa manerantany, fa io no iray amin'ireo tsara indrindra.
Izy io dia akaiky, ary iray-of-a-kind, noho izany ianao dia ao anatin'ny alina mozika iray. Mpankafy rock manerana an'izao tontolo izao, manana klioba Yuyintang ao amin'ny lisitry ny kliobany rock farany farany 10 taona. Ary noho izany, mety tsy hanana endrika ivelany manaitra indrindra, fa ny feo sy ny vibe kosa dia hampiakatra anao.
9. Toerana mozika tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao: Felsenreitschule any Salzburg, Aotrisy
Rehefa manoratra tapakila ho an'ny Fetiben'ny Salzburg, izay nitifiran'izy ireo ny Feon'ny Mozika – azonao antoka fa tsy mampino ity toerana mozika ity. The Felsenreitschule dia efitrano mozika natao ho an'ny baroque, amin'ny 96 arcades ambadiky ny sehatra.
Mandritra ny fampisehoana mozika, ny arcade misy rindrina dia manazava loko, vao mainka mahasarika ny mpanatrika. Na inona na inona tianao mozika, seho ao amin'ny Austrian Felsenreitschule dia hetsika ho an'ny fahatsapana rehetra – tena tokony hanao ahoana ny fihetsika sy ny fiatraikan'ny mozika.
Munich mankany Salzburg miaraka amina lamasinina
Vienna mankany Salzburg miaraka amina lamasinina
Graz mankany Salzburg miaraka amina lamasinina
Linz mankany Salzburg miaraka amina lamasinina
10. The Theatre Fahiny ao Taormina, Italia
Mijery ny morontsirak'i Calabrian, ny teatra taloha tao Taormina dia natsangan'ny Grika tamin'ny taonjato faha-3 talohan'i JK. Ny tanjon'ny teatra mahatalanjona dia fampisehoana mahatalanjona.
Miaraka amin'ny fahitana ny ranomasina sy ny tany mahavariana, ho hitanao ity iray amin'ny mozika manaitra indrindra eto an-tany ity. Ary noho izany, misy efitrano ho an'ny orkesitra, mpandihy, mpihira, ho hitanao fa ity teatra taloha ity dia toerana manaitra amin'ny hetsika mozika mivantana amin'ny filentehan'ny masoandro na amin'ny fiposahan'ny masoandro.
Milan mankany Roma miaraka amina lamasinina
Florence ho any Roma miaraka amina lamasinina
Pisa ho any Roma miaraka amina lamasinina
Naples ho any Roma miaraka amina lamasinina
11. Mao Livehouse any Shanghai
Avy amin'ny elektronika ka hatrany amin'ny pao, Mao Livehouse no toerana mozika lehibe indrindra any Shanghai. Noho izany, raha te hiaina ny tsara indrindra amin'ny tontolon'ny fiainana alina sy mozika any Shanghai ianao, avy eo Mao Livehouse no toerana IT ho an'ny mponina sy ny mpizahatany.
Mao Livehouse no manana rafitra fanamafisam-peo tsara indrindra any Shina, manao azy ho toerana mozika mivantana tsara indrindra, ary toerana hamelana ny volonao sy hikororohana.
12. Toerana mozika tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao: The Theatre Fahiny ao Orange, Frantsa
Ny teatra romana ao Orange dia nampiala voly ireo mpankafy mozika nanomboka tamin'ny taonjato voalohany AD. Any amin'ny tanànan'ny Orange, mandray kaonseritra, ary ny festival opera fahavaratra isan-taona any Frantsa.
Mety ho iray amin'ireo ianao 10,000 olona mankafy fampisehoana mozika tsy hay hadinoina ao amin'ny teatra voatahiry tsara indrindra any Eropa. Ny teatra voasary dia a mitaingina lamasinina avy any Marseille, fa ny dia fohy dia hampiverin'ny tantara anao, hatramin'ny vanim-potoana romana, ary amin'ireo fampisehoana mahatalanjona indrindra eo amin'ny tontolon'ny mozika.
Paris mankany Marseilles miaraka amina lamasinina
Marseille mankany Paris Miaraka lamasinina
London mankany Paris miaraka amina lamasinina
Marseille mankany Clermont Ferrand Miaraka lamasinina
amin'ny Save A Train, Faly izahay manampy anao amin'ny drafitra ny fialantsasatra mahafinaritra ho an'ny 12 toerana mozika tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao amin'ny lamasinina.
Te hampiditra ny lahatsoratray bilaogy “Toerana mozika 12 tsara indrindra eran'izao tontolo izao” ve ianao amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-music-venues-world%2F%3Flang%3DmgNyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, ho hitanao ny zotram-piaranay malaza indrindra - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml.
Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana ny https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, ary azonao atao ny manova ny / ja ho / ru na / de sy fiteny maro hafa.
BestConcertsEurope BestMusicVenuesInTheWorld fampisehoana LiveMusicEurope musicvenue MusicVenues
Mpanoratra mafana fo aho, mpandeha irery sy bilaogera masiaka. Mino aho fa ny fiteny sy ny teny dia fitaovana matanjaka afaka manome aingam-panahy sy mamorona tontolo vaovao. Tiako ny mandeha sy mizara ny diako amin'ny alàlan'ny tantarako amin'ny vehivavy hafa manerantany - Afaka tsindrio eto raha antsoy aho
Drano tsara indrindra Parks In Eoropa ho Vacation
Fiaran-dalamby Travel Denmark, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Travel Europe
Inona Avy Ny Boky Tsara Indrindra Ny Toeram-Pivarotana Ao Eoropa
Train Travel Belzika, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby any Italia, Train Travel The Netherlands, Travel Europe
10 Toerana Indray Mandrakizay
12 Toerana tsara indrindra ho an'ny mpandeha an-tongotra voalohany
12 Toerana fitsangantsanganana ho an'ny tovovavy tsara indrindra eran-tany
12 Tempoly Fahiny Eran-tany
12 Toerana tsara indrindra ho an'ireo tia irery